के यूकेमा आप्रवासीले कर तिर्छन् ?
कुनैपनि देशको सरकारले जनताको लागि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, नियमित राज्य सञ्चालन आदि कार्यको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उठाएको रकम नै कर हो । यथार्थमा भन्नुपर्दा कर हामीले सरकारलाई कुनैपनि शर्त, इच्छाबिना नै तिर्नुपर्ने शुल्क हो । कहिलेकाही यो करको शूल्कले हामी मारमा परिरहेका हुन्छौंँ । तर कर भनेको राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनिरहेको छ ।
हामी सबैले आफ्नो देशमा कर तिरिरहेका हुन्छौं । तर, के तपाईलाई थाहा छ यदि हजुर यूके आउनुभयो भने यहाँ आप्रवासीले पनि कर तिर्नुपर्छ । पक्कैपनि तपाईले याद गर्नुभयो होला ।
युकेको कर प्रणाली अपेक्षाकृत सीधा छ । तर, चीजहरु जटिल हुन सक्छ यदि तपार्इँ यूकेमा निवासी हुनुहुन्छ र विदेशी आय र लाभ जारी छ । यहाँ हामी बताउँछौं कि कसरी अप्रवासीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि तपाइँ गैर–यूकेवासी हुनुहुन्छ र यूकेमा काम गर्न आउँदै हुनुहुन्छ र कम्तीमा तीन अघिल्लो लगातार यूके कर वर्षहरुको लागी यूकेमा बसोबास गर्नुभएको छैन । तपाईको विदेशी कामकाजी दिनहरुसँग सम्बन्धित कमाईको लागि कर राहत दाबी गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ । बेलायत निवासको पहिलो तीन कर वर्ष हुन्छ तपाईका लागि । यो राहत करदाताहरुको लागि उपलब्ध छ जो कराधानको रेमिट्यान्स आधारको दावी गर्दछ र जहाँ उनीहरुको विदेशी कामकाजी दिनहरुसंग सम्बन्धित कमाई भुक्तान गरीएको छ र विदेशमा राखिएको छ । त्यस्तो आम्दानी तब मात्र यूकेमा कर योग्य हुन्छ उनीहरुलाई युकेमा पठाइन्छ ।
त्यहाँ विशिष्ट शर्तहरु छन् कि राहतको लागि लागू गर्नको लागि पूरा गरिनुपर्छ । दृढताका साथ तपाइँ यूके सरकारमा (एचएमआरसी)को मार्गदर्शन पढ्नको लागि सल्लाह दिन्छौं । यदि तपाइँ यो राहतको दावी गर्न चाहानुहुन्छ । विशेष गरी, तपार्इँ सजग हुनुपर्छ कि एक भन्दा बढी प्रकारको आय भएको बैंक खाता बाट युकेमा पठाइन्छ भन्नेबारेमा नियम जटिल छ । त्यहाँ सरलीकृत नियमहरु उपलब्ध छन् यदि तपाइँ आफ्नो पहिलो वेतन भुक्तानी प्राप्त गर्न को लागी एक ’योग्यता खाता’ सेट अप गर्नुहोस् ।
के हुन्छ यदि म बेलायतमा एक दीर्घकालीन निवासी हुँ ?
यदि तपाइँ गैर–अदिवासी हुनुहुन्छ र अघिल्लो नौ कर बर्षहरु मध्ये कम्तीमा सातको लागि युकेमा बसोबास गर्नुभएको छ । तपार्इँले वार्षिक शुल्क (रेमिट्यान्स आधार शुल्क) तिर्नुपर्छ यदि तपाइँ रेमिट्यान्स आधार दावी गर्नुहुन्छ भने ।
यदि तपाईँ गैर–अधिवासी हुनुहुन्छ र रेमिट्यान्स आधार दावी गर्दै हुनुहुन्छ र अघिल्लो चौध कर वर्षहरु मध्ये कम्तीमा बाह्रको लागी युके मा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ, रेमिट्यान्स आधार शुल्क हुन्छ ।
त्यहाँ रेमिट्यान्स आधार दाबी गर्ने र विगत बीस वर्षको सत्रहको लागि यूकेमा बसोबास गर्ने गैर–अधिवासी व्यक्तिहरुको लागि शुल्क लाग्थ्यो । उच्चतम रेमिट्यान्स आधार शुल्क अब लागु हुदैन, किनकि रेमिट्यान्स आधार व्यक्तिहरुको लागि उपलब्ध छैन जो अघिल्लो २० कर बर्षहरुमध्ये कम्तीमा १५ को लागि युके निवासी रहेका छन् । यसको कारण यो हो कि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई युकेमा बसोबास गरेको जस्तो मानिन्छ (अदिवासी मानिन्छ) र त्यस्तै रेमिट्यान्स आधार उपलब्ध हुनेछैन ।
यदि तपाई युकेमा आउनुहुन्छ, यहाँ कर निवासी बन्नुहोस् । विदेशी आय वा लाभ (त्यो हो, आय र यूके बाहिर बाट लाभ) युकेमा तपाइँको बसाईको दौरान, तपाईले अधिक जटिल कर नियमहरुलाई विचार गर्नुपर्छ । यसको कारण यो हो कि युके कर प्रणाली यूकेमा बसोबास गर्ने जो कोहि आफ्नो विश्वव्यापी आय र लाभमा कर लगाउने कोशिश गर्दछ ।
विदेशी आय र विदेशी लाभको उदाहरणहरुमा सामिल छः
अन्य देशमा प्रदर्शन कर्तव्यहरुसँग सम्बन्धित आय (यो एक यूके रोजगारीको लागि हो, वा आय यूकेमा वा बाट भुक्तान गरीएको छ)
१. अर्को देशमा एक व्यवसाय चलाउनबाट मुनाफा
२. अर्को देश मा एक सम्पत्ति भाडामाबाट आय
३. बेच्न वा विदेशी सम्पत्ति टाढाबाट लाभ, उदाहरण को लागी, एक घर वा शेयर
४. विदेशी बैंक खातामा बचतमा ब्याज
विदेशी पेन्शन आय (यसमा हाम्रो छुट्टै मार्गदर्शन हेर्नुहोस्:
अन्य विदेशी लगानी आय, उदाहरणको लागि, विदेशी कम्पनीहरुको शेयरमा लाभांश । यदि तपाइँ एक बासिन्दा हुनुहुन्छ, तर, गैर–अदिवासी हुनुहुन्छ, यूके करको राशी तपाइँले विदेशी आय र लाभमा तिर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाँही तपार्इँ युकेमा पैसा वा सम्पत्ति ल्याउनुहुन्छ वा छैन मा निर्भर गर्दछ ।
कर लगाउने आधार के हो ?
यदि तपाई निवासी हुनुहुन्छ र यूकेमा अदिवासी (वा मानीएको हो), तपाई उत्पन्न हुने आधारमा यूके कर तिर्नुहुनेछ । यो फरक पर्दैन कि तपाइँ विदेशी आय ल्याउनुहोस् वा यूके को लागी विदेशी लाभबाट आय ।
यदि तपाई निवासी हुनुहुन्छ र यूकेमा बसोबास गर्नुभएको छैन, तपाई यूकेको आय र उत्पन्न हुने आधारमा यूके कर तिर्नुहुन्छ । तपाई तपाइँको विदेशी आय र विदेशी लाभमा वा त उत्पन्न हुने आधार वा कराधानको रेमिट्यान्स आधारमा यूके कर तिर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ (तल यो मा अधिक)।
यदि तपाईसँग विदेशी आय वा विदेशी नाफा छ भने, उठ्ने आधार जटिल हुन सक्छ । तर उठ्ने आधारमा कर तिर्नुको मतलब यो हो कि तपाइँ सामान्यतया आयकरको लागी व्यक्तिगत भत्ता र पूंजीगत लाभ करको लागि वार्षिक छुट रकम बाट लाभ उठाउनुहुन्छ ।
बेलायतमा रहेका नेपालीहरुले आफुले मेहनत गरेर कमाएको पैसा अब कानुनी रुपमा नेपाल पठाउन सक्दछन् । बेलायतको रेमिट्यान्स अपरेटर मनिटुले गत अप्रिलबाट यो सेवा को सुरुवात गरेको छ । जस अन्तर्गत कम्पनीले नेपाल पैसा पठाउदा कुनै शुल्क लिने छैन । विनिमय दर पनि अन्य कम्पनिहरु भन्दा उत्कृष्ट भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । मनिटुबाट नेपाल पैसा पठाउनको लागि सर्बप्रथम मनिटुमा आफ्नो अकाउण्टको आवश्यकपर्छ । जसको लागि मनिटु एप्लिकेशनमा अथवा वेभसाइटमा गई आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सेल्फी, फोटो आइडि र प्रुफ आफ एड्रेस अपलोड गरि मनिटु मा आफ्नो अकाउन्ट बनाउन सकिने छ । अकाउन्ट रजिस्टर्ड भैसके पछि सजिलै मनिटु एप्लिकेशन अथवा वेभसाइटमार्फत नेपाल पैसा पठाउन सकिने छ । बेलायतबाट पठाएको पैसा नेपालमा १८१ शहरहरु र गाउँहरूमा सहित गरेर ६ हजार ३०० वटा सुरक्षित र सुविधायुक्त नगद पिकअप स्थानहरु बाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।